XOG: Shabakada kowtharmedia oo heshay xogta ku saabsan halka qaraxa looga soo xiray gaarigii wadajir ku qarxay | kowtharmedia.com
Home WARAR XOG: Shabakada kowtharmedia oo heshay xogta ku saabsan halka qaraxa looga soo xiray gaarigii wadajir ku qarxay
XOG: Shabakada kowtharmedia oo heshay xogta ku saabsan halka qaraxa looga soo xiray gaarigii wadajir ku qarxay
Shabakada wararka kowtharmedia ayaa xuuraansi iyo dabagal xoogan ku sameysay qaraxii maanta lagu weeraray xarunta dagmada wadajir ee gobolka banaadir.
Gaariga qaraxa fuliyay oo ahaa nooca soomalida u taqaan hoomey ayaa waxa uu ku qarxay gudaha xarunta dagmada wadajir.
Qaraxa oo ahaay mid xoogan islamarkaana gilgilay xaafadaha ka dhaw dagmada wadajir ayaa waxaa inbadan la is weydiinaya halka qaraxa looga soo xiray gaarigaan iyo sida uu xarunta dagmada u galay.
Xog hoose oo ay si gaar ah u heleyso shabakada kowtharmedia ayaa waxa ay tibaaxayan in gaariga ku qarxay wadajir qaraxa looga soo rakibay meel kamid ah dagmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose.
Shalay gabal dhicii ayuu gaariga gudaha usoo galay magaalada muqdisho waxaana la sheegay in gaariga uu siday qudaar aad u badan.
Qaraxyada ayaa waxaa lagu soo dhex qariyay qudaarta iyadoona salka dambe ee gaariga la dhigay qaraxyada kadibna qudaarta lagu soo raray gaariga si aan loo fahmin amaba aan looga shakin.
Koontaroolada ku yaala duleedka muqdisho ayuu gaarigaan kusoo gudbay si aan shaki ku jirin waxaana istaajiyay ciidanka koontaroolka mana aysan ka shakin gaarigaan maadama uu waday qudaar aad u badan.
Gaariga waxaa la sheegay in uu waday nin da’da meel dhexaadka ah lagu sheegay waxaana uu gaariga uu shalay gabal dhicii soo galiyay muqdisho isagoona xalay geeyay dagmada wadajir oo maanta lagu qarxin doono.
Gaariga wuxuu soo maray dhowr goobood oo ay gaadiidka ku baaraan ciidamada xasilinta caasimadda mana jirin shaki gaarigaan laga qabay wuuna soo gudbay dhamaan baraha koontaroolada.
Ninka gaariga soo galiyay muqdisho ayaa la sheegay in gaariga uu ku wareejiyay ninka isku qarxiyay isagana uu magaalada gudaha u galay.
Intaas kadib saakay barqadii gaariga waxaa la dhigay meel u dhaw xarunta dagmada waxaana dhowr mar ka shakiyay ciidamada ammaanka balse wadahii gaariga ayaa iska dhigay in gaariga uu ka ciladoobay uuna kusii socdo suuqa dagmada oo qudaarta uu ku dajin rabo sidaas ayeyna ciidanka uga shaki baxeen.
Ilo ku dhaw dhaw laamaha ammaanka ayaa inoo xaqiijiyay in gaariga aan si aad ah looga shakin sidaasna ay ugu fududaatay in uu bartilmaameedkiisa gaaro.
Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxan waxaana ku dhaawacmay mas’uuliyiin uu ku jiro guddoomiyaha dagmada wadajir Cumar C/llaahi Xasan.
Xogtaan waxa ay gaar u tahay kowtharmedia.com
Previous PostAkhriso: Xukuumadda soomalia oo war kulul ka soo saartay weerarkii lagu qaaday xarunta dagmada wadajir Next PostAkhriso: Magacyada mas'uuliyiin badan oo ku dhawaacantay weerarkii ismiidaaminta ahaay ee ka dhacay wadajir